Allgedo.com » Midowga Afrika oo sheegay in rag fara-badan oo ka tirsan Al Shabaab ay doonayaan in wada-hadalo lala gallo?
Ururka Midowga Afrika ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in loo-baahan yahay in xaaladda dalka Soomaaliya lagu soo dabaalo amni iyo kala dambeen, iyadoo uu ka digay in dagaalo hor leh ay ka sii socdaan dalka Soomaaliya.
Ururka Midowga Afrika ayaa wuxuuu daaha ka rogay in xalka dalka Somaliya uu ku jiro, in labada dhinac ee isu haaya dalka Soomaaliya ay wada hadleen, iyadoo aanu markaasi waxba lagu soo kordhin kareyn dagaalo sii socda.
Ergayga Gaarka ah ee Midowga Afrika u Qaabilsan Arrimaha Dalka Soomaaliya Jerry Rawlings, ayaa wuxuu sheegay inaan xalka dalka Soomaaliya lagu raadin xoog iyo quwad, balse sida uu sheegay wada-hadalana lala gallo Xarakada Al Shabaab.
Jerry Rawlings ayaa wuxuu sheegay inay jiraan rag fara-badan oo ka tirsan Xarakada Al Shabaab, oo diyaar u ah buu yiri wada-hadal, raggaasi ayaa wuxuu ka digay in ilbaabada wada-hadalada laga xiro.
“Waxaan ognahay inay jiraan kuwo fara-badan oo Al Shabaab ah oo diyaar u ah wada-hadalo, kuwaasi waa inaan ilbaabadu laga laabin oo wada-hadalo lala gallo, maxaa yeelay waxaynu raadineynaa xalka dalka Soomaaliya iyo sidii nabad loogu soo dabaali lahaa” ayuu yiri mar uu saxaafadda kala hadlaayay xaaladda cakiran ee ka jirta dalka Soomaaliya.
“Dhamaanteen waxaynu raadineynaa waa xalka dalka Soomaaliya, xalka laguma keeni karaayo dagaalo sii socda, hadaba waxaa loo-baahan yahay in wada-hadalo lala gallo Islaamiyiinta wada-hadalada u diyaarka ah” ayuu sii raaciyay Jerry Rawlings.
“Dowladda Kenya waxay raadineysaa xalka Soomaaliya soo maaha, hadaba xalka kuma xirno xoog, mana lihi Kenya wada-hadalo hala gasho, ee inaga oo dhan ayaa xalka Somaliya raadineyna, marka waa inaanu wada-hadalo la-galno Islaamiyiinta wada-hadalada diyaarka u ah” ayuu warkiisa uu ku soo afmeeray Ergayga Gaarka ah ee Midowga Afrika u Qaabilsan Arrimaha Dalka Soomaaliya Jerry Rawlings.
Iskusoo wada-duuboo hadalka ka soo yeeray Ergayga Gaarka ah ee Midowga Afrika u Qaabilsan Arrimaha Dalka Soomaaliya Jerry Rawlings, ayaa wuxuu u muuqdaa mid ay soo dhaweyn doonto Dowladda Soomaaliya, bacdamaa sida looga bartay ay iyadu mar walba diyaar la-tahay wada-hadalo, balse Kenya taasi maku qanci doontaa.